छट्पटाएकी महिलालाई वडाध्यक्षले गरे उद्दार, हस्पिटलको निशुल्क उपचार – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारछट्पटाएकी महिलालाई वडाध्यक्षले गरे उद्दार, हस्पिटलको निशुल्क उपचार
छट्पटाएकी महिलालाई वडाध्यक्षले गरे उद्दार, हस्पिटलको निशुल्क उपचार
सल्यान दार्मा गाउँपालिका मसिनाकी २३ वर्षीया संगीता पुन पेटको दुखाइले छटपटाउन थालेको महिना दिन भइसकेको थियो।सल्यान जिल्ला अस्पतालले उनलाई लकडाउन पूर्व नै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा रिफर गरिदिएपछि उनी तुलसीपुरस्थित भाइको कोठामा आइपुगेकी थिइन्। संयोग त्यस्तै पर्‍यो, भाइकी पत्नी सुत्केरी भएपछि लकडाउनपूर्व उनी सल्यानस्थित घरतर्फ लागे।
विरामी अवस्थाकी संगीता आफ्नी ७ वर्षीया छोरी सिम्रनसँग एक्लै विरानो ठाउँमा छटपटाई रहिन्। खाने कुरा पनि सबै सकियो। उनले यो बीचमा १५ किलो राहतको चामल पाइन्।एक दुई पोका नुन र दुई केजीजति दाल पाइन्।
तर, सहाराविहीन संगीतासँग उपचार गर्ने पैसा थिएन, उपचार गर्न सकिनन्। तुलसीपुरको प्रादेशिक अस्पतालले अपरेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पहिला रकमको जोहो गरेर मात्रै आउन भनी फर्काइदियो।
आमा छटपटाउँदा सानी छोरी रुँदै आसपासका मानिसहरुसँग गुहार माग्थिन्। त्यो क्रम चलिरह्यो। एकदिन सानी सिम्रन रुँदै आमालाई बचाउन स्थानीय सुकलाल परियारको खुट्टा समातेर अनुनय विनय गरिन्।
त्यसपछि परियारले नै तत्कालै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहलाई सोमबार फोन गरेर ती बालिका र उनकी आमाको अवस्थाबारे बताए।वडाध्यक्ष शाह तुरुन्तै आफै स्कूल भ्यान हाँकेर गए। ती महिलालाई उद्दार गरेर तुलसीपुर सिटी हस्पिटलमा पुर्‍याए।
अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गरे। उनको आग्रहमा अस्पतालले उपचार खर्च नलिने बचन दियो। औषधि खर्च वडाध्यक्ष शाहले आफै ब्यहोर्नेगरी उपचार गर्न लगाए। मंगलबार विहान ९ बजेतिर संगीताको सफल अपरेसन भयो।शल्यक्रियामा संलग्न प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शेखर थापाका अनुसार संगीताको दाहिने डिम्वासयमा रगतको ढिक्का (सिस्ट) जमेको थियो।
डिम्वासयमा अण्डा बन्ने र फुट्ने क्रममा कहिलेकाही यस्तो हुने उनले बताए। संगीताको डिम्वासयमा बनेको सिस्ट ह्यामरेज भएर पाठेघरमा इन्फेक्सन सुरु भइसकेको थियो।चिकित्सकको टोलीले सिस्ट निकालेर ओभरीको रिकन्स्ट्रक्सन गरेको थापाले जानकारी दिए। यो जटिल शल्यक्रिया नभएपनि समयमै उपचार नभए विरामीको ज्यान समेत जान सक्ने समेत उनले बताए।
उद्दार गरेर ल्याएकी महिलाको सफल अपरेसनपछि वडाध्यक्षले लागेको खर्चको भुक्तानी आफैले केही दिनमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। वडाध्यक्षको सामाजिक कार्य देखेर हस्पिटल सञ्चालक न्यौपानेले अन्य पदाधिकारीसँग सरसल्लाह गरे।सबैको सहमतिपछि संगीताको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने निर्णय भयो।मंगलवार दिउँसो सिटी हस्पिटल पुग्दा संगीता स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी थिइन्। आमाको खुट्टातिरको बेडमा कुर्सीमा बसेर सिम्रन घोप्टिएकी थिइन्।
संगीताले भनिन् ‘म छटपटाई रहँदा मेरा आफन्तहरु कसैले सहयोग गरेनन्, कोही काम लागेनन्, तर आज तुलसीपुरका मानिसहरु मिलेर मेरो उपचार गरिदिनु भयो।’आफूलाई उद्दार गर्ने मानिस को हुन्, भन्ने उनले चिनेकी छैनन्। तर भनिन् ‘उहाँ जो हुनुहुन्छ मेरो लागि भगवान समान हुनुहुन्छ।’
अस्पतालले अब उनलाई अझैं बढीमा एक हप्ताजति राख्ने छ। त्यसपछि उनलाई घरसम्म पुर्‍याउने तथा तुलसीपुरमै बस्ने भए पनि गाँस बासको बन्दोबस्त मिलाउन भूमिका खेल्ने शाहले बताए।
संगीताले गाउँकै एक युवासँग कलिलै उमेरमा अन्तरजातीय विवाह गरिन्। कामको खोजीमा पतिसँगै भारत गएकी थिइन्। त्यही क्रममा उनी गर्भवती भइन्।
शल्यक्रियामार्फत छोरी सिम्रन जन्मिइन्। त्यसपछि उनका पति बिरानो मुलकमा उनलाई छोडेर बेपत्ता भए। जसोतयो छोरीका साथ सल्यानस्थित घर फर्किइन्।उहिलेदेखि नै संगीताको पाठेघरमा समस्या बल्झिएको हो। सानोतिनो दुखाई होला भन्दै संगीताले अहिलेसम्म पीडा सहँदै आएकी थिइन्।